खानपानमा हामी दिनहुँ गर्छौं यी ६ गल्ती, जो रोगको कारण बन्छ « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
खानपानमा हामी दिनहुँ गर्छौं यी ६ गल्ती, जो रोगको कारण बन्छ
२१ पुष २०७५, शनिबार ०९:०१ मा प्रकाशित
खानपान सम्बन्धी केही प्रचलित मान्यता छ । ‘खान खान जानेमा औषधी, नजाने विष ।’ ‘जति मानिस खान नपाएर मर्छन्, त्यो भन्दा बढी खान नजानेर ।’
खाना वास्तवममा भोक मेट्ने चिज मात्र होइन । यो समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो । खाना कस्तो खाने, के खाने, कसरी खाने भन्ने कुराले समेत स्वास्थ्यमा ठूलो फरक पार्छ ।
त्यही खाना, जो ओखती बन्छ । त्यही खाना, जो विष बन्छ । फरक यति मात्र हो, उक्त खानालाई बनाउन र खाने शैली ।
कस्तो खाना खाने र कसरी खाने भन्ने सन्दर्भमा सदियौंदेखि विभिन्न संस्कारको विकास भएको छ । भूगोल, हावापानी र समुदाय अनुसार उनीहरुले खाने खाना र खाने शैलीमा विविधता छ ।
खानासँग संस्कार र संस्कृति पनि जोडिएको हुन्छ । नेपाली खानाका परिकार पनि जात र स्थानविशेष छन् । खाना खाने शैलीमा भने करिब एकरुपता पाइन्छ ।
अक्सर हाम्रो खानपान शैली त्यती स्वस्थ्यकर मानिदैन । खाना खाने क्रममा हाम्रो ध्याउन्न दुई वटा कुरामा मात्र हुन्छ । एक जिब्रोको स्वाद । अर्को, पेट भर्ने । जबकी दुबै कुराले स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्छ । महत्वपूर्ण कुरा त के भने, खाना भनेको स्वास्थ्यका लागि हो ।
हामी खाना खाने क्रममा धेरै गल्ती दोहोर्‍याइरहेका हुन्छौं । त्यही गल्ती, जसले अपच हुने, ग्याष्ट्रिक हुने मात्र होइन शरीरलाई दिनदिनै रोगी बनाइरहेको पनि हुन्छ ।
गल्ती नं. १
भाडा माझ्नु भनेको भाँडामो भएको जुठो मात्र सफा गर्नु होइन । त्यहाँभित्रका किटाणु र विषाक्त पदार्थहरु हटाउनु पनि हो ।
खाना पस्कने क्रममा तरकारी, दाल, अचार र दही कचौरामा राखिन्छ । र, भुँईमा भएको कचौरा पछि थालमा राखेर दिने गरिन्छ । यसो गर्दा भुँईबाट कचौराको पिँधमा सरेको फोहोर र किटाणु हाम्रो खानामा आइपुग्छ । यस्तो तरिकाले खाना पस्कने बानीले हामीलाई रोगी बनाउन सक्छ ।
गल्ती नं. २
नेपाली प्रचलनअनुसार खानासँगै दही, दुध, फलफूल, मिठाई, पापड लगायतका अन्य खानेकुरा खाने गरिन्छ ।
यसो गर्नुको साटो दाल, भात, तरकारी, अचारको सेवनपछि वाँकी खाने कुरालाई स्न्याक्सको रुपमा लिदा राम्रो हुन्छ । यसले गर्दा ग्यासट्राइटिस, मधुमेह, उच्च वा कम रक्तचाप नियन्त्रण गर्नमा पनि पदत पुग्छ ।
गल्ती नं. ३
हामीले खानामा भातसँगै तरकारी, दाल, अचार आदिको प्रयोग गर्छौं । तर, हामीले मात्रको बढी सेवन गर्छौ र अन्य परिकारहरु निकै कम ।
भात बढी खानु स्वस्थकर मानिदैन । किनकी बढी भातले शरीरमा क्यालोरिको मात्रा बढ्छ । जसले गर्दा मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोललगायतका समस्या हुने गर्छ । सबै परिकारको मात्रा बरावर गरेर खानु स्वस्थकर हुन्छ ।
खानेपानी अभावको कारण शहरी क्षेत्रमा जारको पानी प्रयोग गरिन्छ । तर, चामल र तरकारी पखाल्नको लागि भने धाराको पानी नै प्रयोग गरिन्छ ।
कतिपय किटाणु खाना पकाउने बेला नष्ट हुने गर्छ । पानीमा भएको आर्सेनिक, मक्यूरी जस्ता हेभि मेटलहरु पनि खानामै रहिरहन्छ । यस्तो पदार्थ लामो समय प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रलिकुल असर पर्ने गर्छ ।
गल्ती नं. ४
बिरामीलाई भेट्न जादा प्याकेटको जुुस लाने प्रचलन बढी छ । खरिद गर्न र बोक्न पनि सहज हुने भएकाले प्रायले प्याकेटको तयारी जुस प्रयोग गर्छन् ।
तर, प्राय जुसमा फलफुलको मात्रा कम र चिनी, पानी, ˆलेभर र अन्य केमिकलको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले विरामीको स्वास्थ्यका लदागि फलफुल वा फ्रेस जुस लिएर पुग्दा राम्रो हुन्छ । यस्तो जुस वा फलफुलको प्रयोगले विरामीको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम गर्छ ।
गल्ती नं. ५
बढ्दो शहरिकरणसँगै बच्चा देखि बुढासम्मले खाजाको रुपमा चाउचाउ विस्कुट दैनिक रुपमा सेवन गर्ने प्रचलन हावी हुँदै छ । विस्कुत र चाउचाउ भनेको प्रशोधित अन्न हो ।
यसमा तेल, चिनी र नुनको मात्रा पनि अत्याधिक हुन्छ । जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुर्‍याउँछ । बरु यसको विकल्पमा चिउरा, चना, कर्नफ्लेक्स, सातु, कोदो तथा फापरको परिकार प्रयोग गर्दा स्वस्थकर हुन्छ ।
गल्ती नं. ६
मधुमेह लागेको मानिसले सुगर फ्रि विस्कुट प्रयोग गर्छन् । यस्तो विस्कुट जति बढी खाए पनि स्वास्थ्यमा कुनै स्वास्थ्यमा त्यति असर पुग्दैन भन्ने मान्यता छ । जुन गलत हो । यस्तो विस्कुटमा पनि काब्रोहाइड्रेट हुन्छ । जुन शरिरमा प्रवेश गरेपछि ग्लुकोज बन्छ र रगतमा चिनीको मात्रा बढाउँछ ।
त्यतिमात्र नभएर यो व्याड कोलेस्ट्रोलको रुपमा पनि विकास हुन्छ । परिणाम मुटु रोगको सम्भावना पनि बढाएर लैजान्छ । त्यसैले, सुगर फ्रि विस्कुटको सेवन गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
विदेश जानेहरुले अब सैनिक र प्रहरी अस्पतालबाट खोप लगाउन पाउने
क्यान्सर हुनबाट जोगाउने टुसा उमारिएको गेडागुडी खाँदा हुन्छ यति धेरै फाइदाहरु
प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न खुमलटार पुगे रामचन्द्र पौडेल
अमेरिकन जोनसन खोप लगाएपछि धादिङमा एक बृद्धको मृत्यु